Kedu ihe dị njọ na kaadi azụmaahịa gị? | Martech Zone
Kaadị azụmahịa bụụrụ m ihe egwuregwu oge niile. Emeela m ihe dị iche na kaadị azụmaahịa m - nke mbụ bụ nke m ịde blọgụ na foto m, mgbe ahụ ngwugwu nke Edeturu PostIt, na nke na-adịbeghị anya, ebughibu kaadị na ihe nkesa site na Zazzle.
Taa, m nọ na-ele teleseminar nke Alex Mandossian na usoro azụmaahịa azụmaahịa m na-edebanye aha na ya wee gosipụta nnukwu ohere na ahapụla m ịdafu gara aga cards kaadị azụmaahịa atọ n'usoro!
Truthsfọdụ eziokwu banyere kaadị azụmaahịa
Otutu ndi mmadu anaghi echeta onye ha si na ha.
A na-atụfu ọtụtụ n'ime ha. Paid na-akwụ ụgwọ maka ihe na-adịkarịghị nwere nloghachi na ego!
N'ime ndị na-edebe ha, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-eme ihe… ọtụtụ n'ihi na enweghị mgbe kpatara!
Kedu ihe ga - emeziwanye gị kaadị azụmahịa m?
Tinye foto gị na kaadị azụmaahịa gị. Nke a ga - enyere ndị mmadụ aka icheta onye ị bụ!
Alex kwuru na ị ga-etinye otu ụgwọ ọrụ ọma. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, enwere ihe ọ bụla na kaadị gị nke ị ga-eweta nke ga-eduga mmadụ ime ihe? Ihe atụ ya bụ nọmba 1-800 nwere ozi edere na mbụ. Ọ bụ onye abụghị onye dị mma ma nwee nsogbu… onye kpọrọ ya nwere ike irite uru na ozi a.
Gụnye ozi ahaziri maka ihe omume ị nyefere ya. Ọ bụrụ na ịnọ na mmemme ịkparịta ụka n'ingntanet, nye iwu kaadị ụfọdụ maka mmemme ndị ahụ. Ọ bụrụ n’ikwu n’otu ihe omume, tinye mmemme ahụ! Ọ bụrụ na ị nọ na ogbako… tinye ogbako ahụ. Site na ịhazi kaadị ka ihe omume, ị dị nnọọ nyere nnata na a bọọdụ mbadamba ịkpọ ha ka ha kpọtụrụ ha ma nyekwa ha ihe nje virus. Mgbe Alex nyefere kaadị 500, ọ na-ahụ nleta 2,000 na saịtị ya na nọmba ekwentị ya. Nke ahụ bụ ihe dị mma malitere ịrịa!
Achọrọ m ịtụ kaadị nke azụmaahịa m ọzọ ma aga m etinye ndụmọdụ ndị a. A ga - agbakwunye foto m (rie ude!), Aga m etinye njikọ na nbudata na-enweghị ihe ọ bụla na ndụmọdụ na ndụmọdụ, m ga - edekọ ozi ka mma na Google Voice na ụfọdụ a na - ajụkarị ajụjụ banyere m azụmahịa.
Mee ka m mara ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na usoro azụmahịa m na-edebanye aha na ya. Ọ bụ a bit pricy, ma ọ bụrụ na m na-a otu nkwekọrịta si na-enye pụọ kaadị azụmahịa, ọ ga-akwụ maka dum azụmahịa usoro… na m na na na mbụ video. Enweela m ọtụtụ otuto na kaadị m na - adịbeghị anya - mana enweghị m ike ịsị na ha agaala nje ma ọ bụ nweta m azụmahịa!
Tags: mgbasa ozi ịkwụ ụgwọfacebook ad na-emefufacebook mobile ad na-emefugoogle tinyere mgbasa ozi adihe ọsịsenyiwesalesforce ahịa ojiielekọta mmadụ mmefutwitter ad na-emefu
Sep 10, 2009 na 12: 31 AM
Alex Mandossian na-bụ nwoke ahụ! Chere 'ruo mgbe ị na-ele vidio ahụ nkọwa zuru ezu site na otu esi agba otu teleseminar. Ọtụtụ mmadụ na-enweta ya ezighi ezi !!
Sep 10, 2009 na 2: 12 AM
Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga-ehota isi mmalite m, Doug, mana enweghị m ike icheta ebe m gụrụ nke a, oge ụfọdụ gara aga: kaadị azụmaahịa nwere foto gị dị obere karịa ka a ga-atụba n'ime ahịhịa. Ikekwe onye ọzọ nwere ike ịchọpụta nke a.
Sep 10, 2009 na 3: 34 AM
Agaghị m agbagha ya, Bob! Somefọdụ ụlọ ọrụ na-emefu ntakịrị ihe na kaadị azụmaahịa - n'achọghị uru ha bara ma ọ bụrụ na ejiri ha n'ọrụ.
Sep 10, 2009 na 3: 48 AM
Naanị cheta, ọ bụghị maka ịme kaadị gị ka echefu echefu. Ọ bụ maka inweta atụmanya iji mee ihe mgbe ha rutere n'ụlọ ma ọ bụ laghachi na ụlọ ọrụ.
Sep 10, 2009 na 2:09 PM
E kwuru nke ọma, Patric!
Sep 10, 2009 na 2: 18 AM
Kwesịrị iji ụgbọelu akwụkwọ dịka ọdịdị nke akara ngosi gị na kaadị gị. Eleghi anya, kaadị gị dum ga-abụ akara ngosi gị na nke mbụ mana ozugbo ọ gosipụtara ọ nwere ozi ahụ ị kwuru na post n'elu. Enwere ike isiri gị ike ime kama ọ ga-abụ ihe dị ọcha ma cheta echefu.
Sep 10, 2009 na 3: 33 AM
Nke ahụ bụ nnukwu echiche, na-agbanwe agbanwe! Enwere m ike ile anya ime ihe ahụ n'echiche ahụ n'ọdịnihu. Daalụ!
Sep 10, 2009 na 3: 40 AM
Doug lelee avatar m na-enweghị aha, ụdị agaba na blog 🙂 M wee banye na Twitter ma nwee avatar Twitter nke bụ eserese nke onwe m na-eche ihe kpatara na ọ gbapụ
@bcreative - na-ewepụta ihe oyiyi si gravatar.com - nweta otu! 🙂
Ihe niile dị na mbụ na-ele ya anya na njedebe adịghị agwụ. Echere m na ịrụkwu ọrụ na akụkụ edemede na ihe nkọ nkọ ga-enyere aka. Enweghị ike ikwu ihe ị ga-agbanwe mana mana ị jụọ echiche.